China otomatiki kurongedza muchina fekitori uye vagadziri | TUBO
Simbi Tube & Pipe otomatiki kurongedza Machine:
Otomatiki Kuisira uye Bundling Machine
Otomatiki kurongedza muchina unoshandiswa kuunganidza, kurongedza simbi pombi mumatanhatu kana mana emakona, uye bundle otomatiki. Inomhanya zvakanaka pasina kushanda kwemaoko. Zvichakadaro, bvisa ruzha uye kugogodza kwekuvhunduka kwepombi dzesimbi. Yedu kurongedza tambo inogona kuvandudza yako mapaipi mhando uye kugadzirwa kugona, kudzikisa mutengo, pamwe nekubvisa zvingangoitika njodzi chengetedzo.
1.Kurongedza uye kurongedza ZVINOKOSHA.
2.Perfect pamusoro chubhu.
3.Kushanda kushoma, Simba rekushanda rakaderera.
4.Automatic oparesheni, yakaderera ruzha.
Mapaipi anoendeswa kunzvimbo yekurongedza netafura yekubuda:
1.Pipes kutendeukira kurongedza muchina
Iwo mapaipi anozoshandurwa kumuchina wekutakurisa cheni yekufambisa chishandiso nepombi kutendeuka mudziyo uye ndokuzoendeswa kunzvimbo yekuverenga pombi;
2.Pipe kuverenga uye kuisira
Iyo sisitimu ine chirongwa chakatarwa chekuti mangani zvidimbu zvepombi zvinoda muhombodo yehukuru hwakasiyana, ipapo iyo sisitimu inozotumira kurongeka kumuchina kuverenga uye kuunganidza pombi yakaturikidzana neyakagadzika kudzamara pombi dzakwana dzaunganidzwa - iyo pombi yekuunganidza mudziyo ichaenda pasi kukwirira kweimwe dura kana imwe nhapwa yemapaipi inounganidzwa nekusundidzirwa kuchinhu chekunhonga ； kune zvakare chimwe chigadziro chekugadzirisa kumagumo kune rimwe divi;
Yese bundle yemapaipi inoendeswa kunzvimbo yekusunganidza nemotokari inotakura, ipapo mudziyo wekutora unodzokera kunzvimbo yekuunganidza uchimirira bundle nyowani;
4.Automatic bundling chishandiso
Iyo yakarembera otomatiki bundling kifaa ichashanda seyakagadzika bundling bhandi chinzvimbo chinodiwa nhanho nhanho; kufambira mberi ndekwekuti: muchina unosunga unodzikira pasi kune chinzvimbo chekusunga uye unosangana neyepamusoro pombi dzemapaipi, bhandi rinotungamira bhanhire richavhara, musoro wekusunga unotumira bhanhire, kubatanidza magumo ebhandi, nekuomesa bhandi, kubhuroka uye ndokucheka bhandi; mushure meizvozvo bhanhire rinotungamira chiteshi rinozovhurwa, musoro wekusunga unodzokera kunzvimbo yekutanga uye kugadzirira inotevera bundling;
Iwo mapaipi akasungwa anozoendeswa kunzvimbo yekuchengetera nechengetedzo cheni inotakura mudziyo, iyo inotakura mota inodzoka uye yakamirira iyo inotevera bundle;
Iyo nzvimbo yekuchengetera inochengeta matatu mabundles uye ichaendeswa kune akapera mapombi nzvimbo nenzvimbo crane;
Kutenderera: kuita kwacho kwese kuchadzorwa neiyo maindasitiri PLC otomatiki, zvakare ine basa remanyore uye otomatiki kudzora kuverengera kuenderera kugadzirwa uye kushanda mukurumari;
Pashure: ERW 219mm Tube Mill
Zvadaro: ERW 32mm Tube Mill
Otomatiki Pipe kurongedza Machine
Otomatiki Simbi Pipe Kurongedza Machine
Otomatiki Tube kurongedza Machine
Yakazara otomatiki Simbi Pipe kurongedza Machine